I-Araucaria ehlukahlukene, eyaziwa ngokuthi i-fir noma i-Norfolk pine, yatholwa kuqala ePacific ngendwendwe yabososayensi baseBrithani eholwa uJoseph Banks. I-Araucaria yiyona kuphela i-conifers esetshenziswa njengezitshalo zasendlini. Ezweni lakubo - iziqhingi zase-Oceania nase-Australia - lesi sihlahla singafinyelela ngamamitha angu-60 ukuphakama, kanti isitshalo se-Araucaria asidluli ngamasentimitha angu-160, futhi imbiza encane equkethe isihlahla, inciphise kakhulu futhi yanciphisa ukukhula kwayo.
I-spruce ikamelo idinga kakhulu izimo zokuboshwa. Izinto ezimbi ezizungezile imvelo yezitshalo zingaholela ekufeni kwayo, ngakho indawo ekahle yokukhuphula i-araucaria iyinhlangano yokushisa ehlongozwe ngokukhethekile - ekhaya, isitshalo singonakaliswa umoya omile kakhulu, ukukhanyisa okwanele namazinga okushisa aphansi ngesikhathi sezinkathi ezibandayo.
Uma unquma ukuthenga i-araucaria, okokuqala, kufanele uqiniseke ukuthi kunomsoco omoya owanele kanye nombuso oshisayo wokushisa ekamelweni. Ehlobo, izinga lokushisa akufanele lidlule kuma-20-25 ° C, ebusika ukushisa okungcono kunama-10 ° C (izinga lokushisa eliphakeme kakhulu ebusika lingama-15 ° C).
Ngaphezu kwalokho, qaphela ukuphumula kwegumbi - izinkuni zidinga umoya omusha, ngakho-ke isisombululo esihle singafakwa ekamelweni noma imishini yokushisa umoya wokushisa. Uma ungeke ukwazi ukuyikhokhela - ungenza ngokuhambisa njalo igumbi.
Isici esibalulekile ukukhanyisa. Uma igumbi lapho unquma ukufaka khona isitshalo, njengamakamelo amaningi, linokukhanya okukodwa, kuzodingeka ujikeleze nge-axis yayo cishe ngama-90 degrees njalo (cishe kanye ngesonto). Uma kungenjalo, zitshala izingozi zokuthuthukiswa ezidlula ngokweqile. Futhi, ukunakekelwa kufanele kuthathwe ukuqinisekisa ukuthi ukukhanya kuhlukaniswa - ilanga eliqondile elivela ku-araucaria lizolimaza kuphela.
Ibhodlela le-araucaria kufanele libe likhulu ngokwanele futhi likhulu, futhi libe noqweqwe oluhle lwamanzi. Inhlabathi ebhodweni ilungiswa kusuka emgodini we-peat of grass pey soil and sand in a ratio of 1: 2: 2: 1 noma inqabunga, i-turf, i-coniferous inhlabathi, i-humus, i-peat nesihlabathi ngokwesilinganiso se-2: 2: 3: 2: 2: 2.
Amanzi isitshalo sase-Araucaria silandelwa ukuma amanzi. Lezi zincithakalo zenziwa ukuze zihlukanise nezinto ezisemanzini ezingalimaza isitshalo. Ukuze kulungiswe, amathangi okuxazulula okukhethekile asetshenziswa. Ubude obuncane bokudabuka ngamahora amathathu. Ungenza ngaphandle kwe-sump: kusihlwa, ufake ingilazi evaliwe noma u-koqweqwe lwawo izitsha amanzi. Ekuseni, kanciphisa amanzi kancane kwelinye isitsha, ushiye cishe okwesithathu ketshezi ezitsheni.
Ezikhathini ezifudumele, izitshalo zasendlini zidinga ukuchelela okusebenzayo ngenxa yokwesatshiswa komhlabathi, nokunakekelwa kufanele kuthathwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi ayikho inqwaba yamanzi ebhodweni.
Ebusika, ngaphezu kokuchelela, lesi sitshalo sezindlu sidinga ukusifaza njalo kwezinaliti ngamanzi amile ekamelweni lokushisa, ikakhulukazi emakamelweni anezinga lokushisa lomoya elidlula ukushisa okungcono (10 ° C). Entwasahlobo nehlobo, kanye namaviki amabili, i-araucaria isondiswa ngesisombululo esibuthakathaka samafomulisi enokuqukethwe okuphansi kwe-calcium (i-calcium ngokweqile enhlabathini isongela ukukhula kwesitshalo), kanye ngenyanga - ukumnika i-mullein. Ngomsoco okwanele, amahlumela ayoba mncane futhi abuhlungu.
Njengoba lesi sitshalo sikhula, kungase kudingeke ukuyifakelwa. Njengoba i-Araucaria ingakubekezeli ukufakelwa kwesitshalo, kunconywa ukuthi lokhu kungenziwa kaningi kangako kanye njalo eminyakeni engu-3-4, kusukela ngo-March-Ephreli kuya ku-Agasti.
Isihloko somuthi sidinga ukunakekelwa okukhethekile - ngomonakalo wayo i-araucaria iyeka ukuthuthukiswa.
Indlela ethandwa kakhulu yokusakazwa kwe-araucaria ihluma nge-cut stem semi-woody cuttings.
Sika izintambo ezivuthiwe ezingama-araucaria omdala 3-4 cm ngaphansi kwe-whorl bese uzikhipha usuku endaweni e-shady. Ngemuva kwalokho, hlanza izindawo ezinqunywe kusuka ku-juice e-resinous bese usebenzisa i-powder yamalahle. Tshala izithelo eziqhamuka esihlabathini noma inhlanganisela ehlanganisiwe ye-peat nesihlabathi bese umboza ibhodlela nge-can nge jar noma ibhodlela.
Ukuqothulwa kwe-Araucaria kuthatha izinyanga ezingu-4-5. Ukunciphisa le nkathi kuze kube yizinyanga ezingu-1-2 kungenzeka, uma usuqalile ukusika ama-cuttings e-mini-greenhouse ekhethekile ngokushisa okuphansi futhi ugcine ukushisa okungama-24-26 ° С.
Ungakhohlwa ukuthi uphefa njalo futhi usebenzise umoya wokusika ngezinqubo zokuqothula. Ngemuva kokubopha i-coma enhlabathini, izimpande ze-cuttings zingatshalwe zibe yi-substrate efanelekile isitshalo somuntu omdala (bheka isigaba esithi "Ukulungiselela igumbi").
Indlela elula futhi elula ukuhlwanyela imbewu. Imbewu yokuhlwanyela i-araucaria kufanele ibe yintsha, ukuhlwanyela kufanele kwenzeke ngemuva kokuvuna.
Gcwalisa izimbiza ngenhlanganisela yomhlaba we-peat nesihlabathi futhi ngamunye uhlume imbewu kuwo. Gweba inhlabathi ngamanzi amancane bese umboza ngendwangu yesiphagnum.
Amahlumela okuqala avela amasonto amabili kuphela emva kokutshala, ekugcineni inqubo yokuhluma izoqedwa ezinyangeni ezingu-2-3. Ukufiphala ngezikhathi ezithile bese uphahla ukuvela kwamahlumela.
Uma izimpande zenzalo ziboshwe yonke indawo, ungayifaka embizeni enkulu enhlabathini efanelekayo isitshalo somdala.
Ukuvikeleka ngokumelene nezinambuzane.
I-Araucaria iyisitshalo esimelana ngokugcwele nezilokazane, kodwa kufanele ivikelwe kuma-aphid, i-mealybugs nezinambuzane eziqondile ze-conifers.
Qaphela ukuthi umonakalo we-aphid ulula: ku-aphid esonakele, izinaliti ziphenduka ophuzi, ubuso bawo buqhekekile, futhi ukumboza okunamathelayo, okunamnandi kubonakala - amazolo omusi. Uma kutholakala ama-aphid, hlambulula indawo ethintekile yesitshalo ngamanzi asozini noma uhlanze nge-brush yesepha. Uma ukutheleleka kunamandla kakhulu, kungcono ukususa izindawo ezilimele, ngaphandle kwalokho ubungozi bokutheleleka kuwo wonke umuthi. Emva kokukhipha ama-aphid, isitshalo kufanele siphathwe nge-infusions yamagciwane (ugwayi, i-dandelion, u-anyanisi, i-yarrow, i-tansy) noma amalungiselelo amakhemikhali asekelwe kuma-pyrethroids. Ama-aphid ngokushesha asetshenziselwa izidakamizwa, ngakho-ke uguqule njalo ikhambi elisetshenzisiwe.
I-mullet ipowdery ibhekwa njengenye yezinambuzane eziyingozi kakhulu ezitshalweni zasendlini. Ukutheleleka kubonakala ekuhlobheni kwesitshalo ngensimbi emhlophe. Ukumboza lesi sitshalo, ama-chervets anamathela emajukeni amahlumela amancane, okuholela ekuthuthukiseni nasekumiseni kwesitshalo. Uma ngabe ukutheleleka akusizi lutho, susa izinambuzane ezifakwe emanzini asozini nge-swab yekotini, bese kuthi kathathu uphathe isitshalo ngotshwala, i-tincture ye-calendula noma isisombululo sesobho elihlaza. Uma kwenzeka ukutheleleka okukhulu, sebenzisa imithi ekhethekile.
Indlela yokutshala ama-strawberry ensimini?
Izifo zezitshalo zokuhlobisa
Cactus cleistocactus, ukunakekelwa
Umanyolo wezitshalo zasendlini, izitshalo
Sikhula irises i-plot siqu
Indlela yokunakekela kahle i-rose - isitshalo enhle nesine-whimsical?
I-Cherry Soup (isiHungary)
Imfumbe yokulala. Yini intombazane engaphupha ngayo?
Burger ngewundlu, ikhukhamba kanye ne-sauce
Ikhekhe nge-vanilla ne-cardamom
Ikhodi ye-Neskuchny yokugqoka: I-TOP-3 izithombe eziphathekayo zehhovisi
Izinhlayiya zezinwele ukukhula: zokupheka ekhaya best
Lokho amadoda abathanda abesifazane
Ukwaneliseka noma ubuciko be-orgasm yabesifazane
I-Vareniki amazambane ku-yogurt
Indlela yokupheka isitsha se-lagman
I-pasta egcwele isoso nesipinashi
Sihola ingane enkulisa
Indlela yokuziphatha kahle ephathini?